Serivisy sy fiantohana - AngelBiss Healthcare Inc.
AngelBiss dia manana rafitra feno miaraka amina serivisy matihanina.
Serivisy mialoha ny varotra dia manome fanohanana toy ny:
* Fanohanana sy fanohanan'ny consulting.
Ny mpiasan'ny AngelBiss dia hanohana ny fanontaniana apetraky ny fangatahanao manokana momba ny vokatra, ary avy eo dia hanome ny mety ho anao.
* Fanohanana fanandramana santionany.
AngelBiss koa dia manome fitsapana santionany alohan'ny filaharana betsaka raha mila izany ianao.
* Jereo ny Factory
Tongasoa an-tsitrapo tokoa i AngelBiss.
Miaraka amin'ny Guarantee etsy ambany:
1.Ny vokatra misy fiantohana feno 3 taona.
-AngelBiss dia hanome mpividy amin'ny kojakoja fanampiny (ao anatin'izany ny birao lehibe, compressor ary fandriana sivana fotsiny) mandritra ny 3 taona fiantohana feno isaky ny fandefasana amin'ny 2% amin'ny habetsaky ny baiko rehetra. Atombohy amin'ny faharoa
taona no hamaly ny tahan'ny fanoloana ny faritra.
-Ny ampahany fanampiny izay mety tsy ho an'ny mpividy (noho ny fanamboarana ny vokatra ao anatin'ny fe-potoana fiantohana) ary ilaina amin'ny fanamboarana vokatra bebe kokoa dia halefan'i AngelBiss any amin'ny mpividy amin'ny
halefa any amin'ny mpividy mandritra ny 14 andro aorian'ny fandefasana vola AngelBiss.
-Ny entana azo ampiasaina (toy ny sivana rivotra, sarontava, kitapo nebulizer, kanula) dia tsy voarakotra ao anatin'ny vanim-potoana fiantohana. Ireo entana fanampiny azo alefa dia alefan'ny AngelBiss amin'ny vidin'ny mpividy.